ရင်သားအလှကို ဖော်ပြရတာကို နှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကန်ဒဲလ်ဂျန်နာ | Buzzy
ရင်သားအလှကို ဖော်ပြရတာကို နှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကန်ဒဲလ်ဂျန်နာ
ကန်ဒဲလ်ဂျန်နာတစ်ယောက် w မဂ္ဂဇင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူမနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ကနျဒဲလျဂနျြနာတဈယောကျ w မဂ်ဂဇငျးနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ သူမနဲ့ ပတျသတျတာတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖွကွေားပေးခဲ့ပါတယျ။
သူမဟာ မကြာခဏဆိုသလို သူမရဲ. ရင်သားထိပ်ကို အရှင်းသား ဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးခဲ့သလို အရှင်းသားဖော်ပြထားတဲ့ ဝတ်စုံနဲ့လည်း လမ်းထွက်ချင် ထွက်တက်သူပါ။
သူမဟာ မကွာခဏဆိုသလို သူမရဲ. ရငျသားထိပျကို အရှငျးသား ဖျောပွထားတဲ့ ဓါတျပုံတှေ ရိုကျကူးခဲ့သလို အရှငျးသားဖျောပွထားတဲ့ ဝတျစုံနဲ့လညျး လမျးထှကျခငျြ ထှကျတကျသူပါ။
သူမက အင်တာဗျူးမှာ ကျွန်မရဲ. အဝတ်အစားမှာ ရင်သားထိပ်လေးတွေ ပေါ်နေတာကို ဘာလို့မှန်းမသိ ကျွန်မမလန့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကို သဘောကျပါတယ် ၊ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ငါငယ်တုန်းက အတော်ကြည့်ကောင်းခဲ့ပါလားလို့ ပြန်ပြီးသဘောကျခင်တယ်လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
သူမက အငျတာဗြူးမှာ ကြှနျမရဲ. အဝတျအစားမှာ ရငျသားထိပျလေးတှေ ပျေါနတောကို ဘာလို့မှနျးမသိ ကြှနျမမလနျ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ ။ ဒီလိုဖွဈနတောကို သဘောကပြါတယျ ၊ အသကျကွီးလာတဲ့အခါ ငါငယျတုနျးက အတျောကွညျ့ကောငျးခဲ့ပါလားလို့ ပွနျပွီးသဘောကခြငျတယျလို့ သူမက ဆိုပါတယျ။